मुम्बईमा बस्दै आएकी तेरिया मगर झन् सुन्दरी हुदै ,महिनाको कमाई लाख भन्दा बढी -फोटो फिचर | Butwal Dainik
कठै मेरो सरकार अब त राहत देउ !! भोकले मरिसके किसान ?
घिउकुमारीले फाइदसँगै यति धेरै बेफाइदा पनि गर्छ आजै होसियार बनौं
कसरी हुन्छ स्तन क्यान्सर ? शुरुमैं कसरी थाहा पाउने त ?
होमवर्क नगरेको भन्दै शिक्षकले पिट्दा १३ बर्षिया बालकको मृत्यु
प्रधानमन्त्री देउवाले भने : एमसिसी पास हुन्छ
आगामी सोमबारसम्मको मौसम पूर्वानुमान,सतर्क रहन आग्रह
नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी के प्रेम सम्बन्धमा छन् त वास्तविक यस्तो छ ..
कार्तिक ०६ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
शरदको अंगालोमा बेरिएर इन्दिराले भनिन्, ‘तिम्रो अँगालो मेरो घर’
अस्ट्रेलियामा श्रीमानको हत्या गरेको भन्दै नेपाली युवतीलाई ३ वर्ष जेल सजाय
जब ‘भाइरल रोड’ हेर्न प्रधानमन्त्री देउवा पुगे…
मुम्बईमा बस्दै आएकी तेरिया मगर झन् सुन्दरी हुदै ,महिनाको कमाई लाख भन्दा बढी -फोटो फिचर
मोहन के सी
२०७८ अषाढ ३, बिहिबार (४ महिना अघि)
१०१६ पटक पढिएको
अनुमानित पढ्ने समय : १५ मिनेट
१४ बर्षको उमेरमा चर्चित बनेकी तेरिया मगर अहिले १८ बर्षकी भैइन । डान्स रियालेटी शोबाट चर्चामा आएकी तेरियाको घर रुपन्देहीको रुद्रपुर हो । नृत्यकौशलका कारण भारतमा भएको प्रतियोगिता ‘डान्स इन्डिया डान्समा’ पहिलो स्थान हासिल गरेपछी विश्वसामु चिनिन सफल भईन । तेरिया अहिले मुम्बईमा बस्दै आएकी छिन् उनी मुम्बईमा भएपनी नेपाली भएको कारण नेपालबाट ठूलो माया दिइन्छ । १८ वर्ष पुगेकी तेरिया उमेर बढेसँगै झनै सुन्दर हुँदै गएकी छिन् । उतिबेलाकी फुच्ची तेरिया अहिले जवान र निकै हट भएकी छिन् ।
डान्स ईन्डिया डान्सको बिजेता बनिसकेकी तेरिया भारतीय टेलिभिजन च्यानल कलर्स टिभीबाट प्रशारण हुने वास्तविक कार्यक्रम ‘झलक दिखला जा ९’ को पनि विजेता बनिन् । त्यसपछी त झनै उनको चर्चा चुलियो । झलक दिखला जामा सलमान युसुफ खान सँग उनको प्रतिष्स्पर्धा रहेको थियो । सलमान युसुफ खान र सान्तनु महेश्वरिलाई कडा प्रतिस्पर्धामा पछि पार्दै तेरिया पहिलो स्थानमा ओगट्न सफल भएकी थिईन ।
भारतको चर्चित डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्स इण्डिया डान्स लिटिल मास्टर’को तेस्रो सिजन जितेर चर्चामा आएकी नेपाली डान्सर तेरिया मगर त्यतिबेला मात्रै १४ वर्षकि थिईन । सानै उमेरमा उनले देखाएको प्रतिभाका कारण अहिले पनि धेरैले मन पराउने गर्छन् । भारत र नेपालका विभिन्न ठूला स्टेज कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो प्रस्तुति दिईसकेकी तेरिया देश तथा बिदेशमा कार्यक्रमकै लागि हिडिरहन्छिन ।
रुपन्देही जिल्लाको रुद्रपुर, सुनगाभाचोककी १८ वर्षकी तेरियाको आमाको नाम अस्मिता फौजा मगर र बाबा बिजय फौज मगर हो । उनलाई धेरैले तेरिया भनेर चिनेपनि पूरा नाम भने तेरिया फौजा मगर हो । भारतीय रियालिटी शो ‘डान्स इन्डिया डान्स’ र ‘झलक दिखलाजा’ दमदार डान्स गरेर प्रतिभा देखाएकी तेरिया पछिल्लो समय गायन क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुन थालेकी छिन् । र गायनमा पनि आफिलाई अब्बल गायिकाको रुपमा चिनाउदै लगेकी छिन ।
बेला बेलामा टिकटकमा आफ्नो गायन प्रतिभालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी टेरियाले पहिलोपटक कभर गीतमा आफ्नो सुरिलो आवाज दिएकी थिईन । पहिलोपटक ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ गीतको कभर गीत गाएपछि उनले राम्रो तारिफ पाईन । अब्बल नृत्यले सबैको मन जित्न सफल तेरिया सामाजिक संजालमा निकै सकृय रहन्छन् ।
तेरिया विभिन्न पोजमा लिगेका तस्बिरहरु सार्बजनिक गरिरहन्छिन । पढाईलाई निरन्तरता दिईरहेकी तेरियाले स्टेज पर्फमेन्सका साथै विभिन्न बिज्ञापनहरुमा खेलेर लाखौ कमाईरहेकी छिन् । सानैदेखी नृत्यमा अब्बल रहेकी तेरियालाई हजुरबुबा निकै ठुलो साथ मिल्यो । नृत्य सिकाउन लैजाने देखि लिएर, भारतको रियालिटी शो सम्म लैजान हजुरबुबा भुमिका रहेको छ, साथ रहेको छ, सहयोग रहेको छ ।